Distribution Transformers being inspected for repair dated 12th &13th June 2017. – Neek
एक्स्पोमा नीक ट्रान्सफर्मर ब्राण्डिङ र जनचेतेतना अभिवृ
Distribution Transformers being inspected for repair dated 12th &13th June 2017.
भारत, बङ्गलादेश, अफ्रिकालगायत मुलुकमा
निर्यात विस्तार गर्दै छौं
प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल इकरात इञ्जिनीयरिङ प्रालि (नीक) नीकले अहिले इन्नोभेशनभन्दा पनि उत्पादन तथा बजार विस्तारमा जोड दिएको छ । क्षमता अभिवृद्धिलाई जोड दिएका छौं । इन्नोभेशन अत्यावश्यक विषय हो । व्यावसायिक तथा राजनीतिक अनुकूलता नभएको अवस्थामा हामीले इन्नो भेशनमा जोड दिन नसकेका हौं । अर्काेतर्फ हामीले आफ्नो गुणस्तर कायम गर्न पनि बढी जोड दिने गरेका छौं । यद्यपि, अहिले हामी अटोमेशनमा जा“दै छौं । नीक २१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसको अहिलेसम्मको यात्राबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नीकलाई २१औं वर्षसम्म ल्याइपु¥याउन सक्दा म सन्तुष्ट छु । तर, मुलुककै व्यावसायिक वातावरण खस्किएको अवस्थामा नीकको व्यावसायिक दृष्टिकोणले चाहिँ पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । क्वालिटीलाई निरन्तरता दिएका छौं । ब्राण्ड स्थापित भएको छ । मुलुकका सरकारी तथा निजीक्षेत्रले हाम्रा उत्पादन उपयोग गरेका छन् । अझ निजीक्षेत्रले नीकलाई बढी विश्वास गरेका छन् । यस्ता पक्षलाई आत्मसात् गर्दा सन्तुष्ट हुन सकिन्छ । तर, व्यवसाय अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । हाम्रो क्षमताअनुसार हामीले उत्पादन तथा विक्री गर्न पाएका छैनौं । जलविद्युत् तथा औद्योगिक विकास एवम् विस्तार नहुँदा ट्रान्सफर्मरको व्यवसाय अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यसरी अपेक्षित व्यवसाय वृद्धि नुहँदा चाहिँ पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकिँदैन । व्यवसायिक रूपमा सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्थामा नीकका लगानीकर्ता तथा कर्मचारीले प्रतिफल पाउने सम्भावना हुन्छ ? हामीले अपेक्षित व्यावसायिक वृद्धि हासिल गर्न नसकेको मात्रै हो । तर, कम्पनी उत्पादन, विक्री र आम्दानीका हिसाबले एउटा तहमा ुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा लगानीकर्ता तथा कर्मचारीले प्रतिफल नपाउने कुरै भएन । यसअघि पनि हामीले लगानीकर्तालाई शतप्रतिशत लाभांश र कर्मचारीलाई ८ महीनाको बोनस दिएका थियौं । अहिले पनि हामी आफ्ना लगानीकर्ता तथा कर्मचारीलाई लाभांश एवम् बोनस दिलाउन सक्छौं र दिन्छौं पनि । अहिले नीकले वार्षिक करीब आधा अर्ब करोडको कारोबार गरिरहेको छ । नीक एकप्रकारले नेपाल तथा भूटानमा ट्रान्सफर्मरको पर्यायवाची नै बन्न थालेको छ । यो सफल ब्राण्डिङ पछाडिको मुख्य कारण के हो ? ‘सफल ब्राण्डिङ’को कारण भनेको हाम्रो गुणस्तरीय उत्पादन र विक्रीपछिको सेवा नै हो । हामीले आफ्नो गुणस्तर कायम गर्न सकेका छौं। त्यसैले पनि सबैले हामीलाई चिन्छन् । विक्रीपछिको सेवामा पनि हामी अन्यभन्दा निकै अघि छौं । भने को समयमा भनेको सर्भिस दिने क्षमता हामीमा छ । विनाअवरोध २१ वर्षे यात्रा तय गर्न सफल भएका छौं । लाभांश र बोनसलाई निरन्तरता दिन सकेका छांै । यसको सकारात्मक सन्देश गएको छ । खासगरी गुणस्तरीय काम गर्न सकेकै कारण हाम्रो ब्राण्ड स्थापित हुन सकेको हो । हामी गुणस्तर र ब्राण्डमा संवेदनशील छौं ।
स्वदेशी लगानी र उत्पादनका हिसाबले मात्र नीक ट्रान्सफर्मरलाई हेर्ने कि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पनि ? साँच्चै भन्ने हो भने अहिले नेपालमा अन्य कम्पनीले ट्रान्सफर्मर उत्पादन नगर्ने हुँदा हाम्रो प्रतिस्पर्धा विश्वबजारका उत्पादनसँग नै हो । स्वदेशी लगानी र उत्पादन भनेर कमसल वा उपयोगविहीन वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । र, नीकको हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ । हाम्रो उत्पादन गुणस्तरीय भएकै कारण नेपालका सरकारी तथा निजीक्षेत्रमा र भूटानमा समेत उपयोग भएको हो । धेरैजसो आयोजना एवम् उद्योग–प्रतिष्ठानमा टेण्डर आह्वान गरेरै ट्रान्सफर्मर खरीद गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता ठाउँमा हामीले विदे शी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै आफ्ना उत्पादन विक्री गर्छौं । भावनात्मक रूपमा मात्रै हामीलाई हेर्न आवश्यक छैन । हाम्रा सबै ग्राहक पनि पूर्ण सन्तुष्ट छन् । यसले हामीलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ । नेपालमा नीकबाहेक कुनै पनि कम्पनीले ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्दैनन् । प्रतिस्पर्धी नभएको यस्तो अवस्थामा गुणस्तर वृद्धिमा तपार्इंहरूले जोड दिनुहुन्छ भन्ने के ग्यारेण्टी ? हाम्रो क्वालिटीकै कारण प्राधिकरणबाहेक सबैले हाम्रो ट्रान्सफर्मर खरीद गरिरहेका छन् । निजीक्षेत्रले मात्रै होइन, अन्य सरकारी निकायले पनि नीकको ट्रान्सफर्मर खरीद गरिरहेका छन् । त्यसैले, हाम्रो गुणस्तरमा शङ्का नगर्दा हुन्छ । यहाँ उत्पादन भए पनि हामीले विदेशी उत्पादनसँग त प्रतिस्पर्धा गरे कै छौं नि । हाम्रो उत्पादन गुणस्तरीय नभएको भए भूटानले पनि त उपयोग गर्दैनथ्यो होला ? स्वदेशकै ठूलाठूला कर्पोरेट हाउस तथा उद्योगले पनि नीककै ट्रान्सफर्मर उपयोग गर्दै आएका छन् । हामी कुनै पनि अवस्थामा गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं । इन्नाभे शे नका े हकमा तपाइर्हं रू कत्तिका े अगाडि हनु हु न्ु छ ? नीकले अहिले इन्नोभेशनभन्दा पनि उत्पादन तथा बजार विस्तारमा जोड दिएको छ । क्षमता अभिवृद्धिलाई जोड दिएका छौं । इन्नोभेशन अत्यावश्यक विषय हो । व्यावसायिक तथा राजनीतिक अनुकूलता नभएको अवस्थामा हामीले इन्नोभेशनमा जोड दिन नसकेका हौं । अर्काेतर्फ हामीले आफ्नो गुणस्तर कायम गर्न
PREVIOUS | MD of Nepal Ekarat Engineering Co. Pvt. (NEEK) and MD of Bhutan Power Corporation (BPC) MOU signing ceremony